Zvishandiso Kusarudza - Suzhou Bricmaker kushandisa michina Co., Ltd.
Chiyero chekuvimbika: Iyo michina inogona kuve yakadzikama mune imwe nguva, kana mukati meimwe nguva yenguva, kwete chero mukana wematambudziko.
Chinyorwa: Gearbox giya zvigadzirwa uchishandisa 20 Cr-Mn chiwanikwa, izvo zvinhu zvinovandudza kupfeka kuramba kwechigadzirwa, zvakare simbisa kuomarara.
Akarurama: nokuchengetedza machine → chafariz achinatsa → metalworking → Carburizing → giya vachikuya, zvikuru kuvandudza upenyu ka 5-10 nguva.
Simba: Tichifunga nezve zvinoitika zvidhinha zvekushandisa fekitori mashandiro, saka kuwedzera kubva dhizaini yekudzivirira chinhu che1-2 nguva.
Chimiro: Pakugadzira dhizaini, senge extruders extrusion axial simba inopfuudzwa kuburikidza neyekutakura sleeve yekuisa roller roller, uyezve ndokupararira kune base unit, ichigadzira extrusion muchina chokurukisa pasina axial simba, chete radial simba.
Zviri nyore: Senge makamera ekupfura eJapan, munhu wese anogona kuishandisa.
Mutengo wekuita: Kuzara uchiona simba-rinoshanda chinhu, maitiro ekudyara mune imwechete mamiriro, kuwedzera kuwedzera kugadzirwa uku uchidzikisa simba uye zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira.
Kufambira mberi: Robhoti system yakavimbika, inochinja uye iri nyore.
Tembiricha system, kuburitsa masisitimu uye matsvuku ezvidhina kurongedza system, kudzikisira mabasa.
Sevhisi: Inesarudzo yemidziyo inofanirwa kufunga nezve kugona kwevanopa 'mushure mekushandira uye sevhisi system, yakasimba mushure mekutengesa system inotsigira michina yakavimbika.
► kupindura panguva yakakodzera ► mabasa ehunyanzvi ► sevhisi revhizheni ► sevhisi-yekumira
Pfungwa yebasa: kurerutsa matambudziko avo, zvinhu zvidiki zvechinhu, kune avo masevhisi, nekudaro kupfupisa nguva, kuswedera padyo, kudzikisa mutengo, uye kudzikisa mutengo, kunatsiridza kugadzirwa kwevashandisi, uye masevhisi masevhisi.
Sarudzo: Inokodzera maitiro ekusarudza chakakodzera michina, hapana yepasirese mhando yemidziyo inoenderana neese maitiro.
Zvishandiso zvakasiyana Siyana zvidhinha zvakasvibira Zvakasiyana nzira yekuisira Yakasiyana auger
Yakasiyana screw Screw kukwira Kwakasiyana kutenderera kumhanya Akasiyana magetsi emagetsi Akasiyana kugona
Sarudza chakasiyana kugadzira zvidhinha